Wararkii Ugu dambeeyay ee Caalamka iyo Warqabadka SBC International – SBC
Wararkii Ugu dambeeyay ee Caalamka iyo Warqabadka SBC International
Posted by editor on June 20, 2011 Comments
Madaxweynihii hore ee Tunisia oo ganafka ku dhuftay Maxkamad lasoo taago.
Maxdaxweynihii xilka laga tuuray ee Tunisia Zaynal Caabidiin Bin Cali ayaa ka hadlay Maxkamada la doonayo in la saaro,gaar ahaana lagu maxkamadaynayo musuqmaasuqii iyo siyaasad xumadii dalkaasi ka dhacday intii uu xilka hayay.
Zaynal Caabidiin waxaa uu ganafka ku dhuftay in uu musuqmaasuq iyo isdaba marin uu sameeyay intuu uu madaxweynaha ka ahaa Tunisia,waxaana uu ku macneeyay Maxkamadayntiisa in ay tahay Waraaq been lagu dhoodhoobay oo aan micna ku dhisnayn.
Zaynal Caabidiin oo Tunisia isaga cararay kadib kacdoon looga soo horjeeday oo dalkaasi ka dhacay ayaa horay loogu eedeeyay isaga iyo qoyskiisa in ay lacago fara badan ay lunsadeen,iyadoona mudadii xukunkooda ay si sharci dara ah ay u abuureen hanti aanay lahayn.
Dowlada xiligan sii haysa talada Tunisia ayaa u ololaynaysa Maxkamad lagu saaro Zaynal caabidiin gudaha Tunisa,iyadoona ay codisyo ugu direen Dowlada Sacuudiga in ay kusoo wareejiso Zaynal Caabidiin si loogu maxkamadeeyo dhibaatooyinkii uu gaystay intii uu talada dalkaasi hayay.
Tunisia ayaa ahayd wadankii ugu horeeyay oo ay ka curteen banaabaxyada kacdoonka wata ee haatan ka socda inta badan dalalka carabta,waxaana ay weli shacabka dalkaasi ku adkaysanayaan in ay ka dhabaynayaan go aankoodii hore ee ahaa in ay la xisaabatmayaan Zaynal caabidiin iyo qoyskiisa.
Dhalinyarada kacdoonka Yemen oo ku baaqay in mudahaaraadyada Malyuun gaaraya.
Iyada oo weli Yemen ay ka socdaan banaabaxyada isbadal doonka ah ayaa war warbaahinta laga siidaayay,waxaa ay dhalinyarada kacdoonka ay ku baaqeen in Maanta oo Isniin ah ay Banaabaxyadu Malyuun ay gaaraan
Dhalinyarada kacdoonka waxaa ay ku sheegeen warkooda in ay uga gol leeyihiin Banaabaxyadan cusub ee ay ku baaqeen in ay noqdaan kuwo meesha kasii saara inta ka hartay Nidaamka Xukuumada Cali C/lla Saalax.
Sidoo kale dhalinyaradu waxaa ay tilmaameen in ay doonayaan in wadanka laga tarxiilo ama laga saaro inta ka hartay Dowlada Saalax,waxaana sidoo kale ku baaqeen in la dhiso dowlada KMG oo ay kooxaha kacdoonku hogaaminayaan.
Magaalooyin ay kamid tahay Ticis ayaa haatan waxaa isugu soo baxay Kumanaan qof,waxaana mid kamid ah dadkii isu soo baxay oo la hadlayay Kanalka Al jazeera uu sheegay in ay isaga ula muuqato in lasoo gaaray wakhtigii ay soo afjarmi lahaayeen banaabaxyada,maadaama sida uu sheegay uu aamin san yahay in Nidaamkii Saalax uu meesha ka baxay,waxa ay haatan u banaabaxayaana ay tahay In ay dhamaystireen cayrinta inta ka hartay Nidaamkaasi.
Kumanaan qof ayaa naftooda ku waayay banaabaxyada isbadal doonka ah ee ka dhacay dalka Yemen,waxaana shacabka dalkaasi ay weli ku adkaysanayaan sii waditaanka banaabaxyada tan iyo inta ay ka xaqiijinayaan in gabi ahaanba ay xukunka faarujiyeen Cali C/lla Saalax iyo taageerayaashiisa.
Nato oo qirtay in Afar kamid ah Askarteeda ay saacadihii aynu soo dhaafnay ay ku dhinteen Koonfurta Afganistan.
Isbahaysiga Nato ayaa qirtay in Afar kamid ah Askartooda ay saacadihii aynu soo dhaafnay ay ku dhinteen Koonfurta Afganistan,iyadoona aanay wax israsaasayn iyo iska hor imaad ah aysan la kulmin.
Sarkaal u hadlay Ciidamada isbahaysiga Nato ayaa sheegay in Afar kamid ah Askartooda,gaar ahaana ka tirsan kuwa howl galada ka wada Gobolka Helmand ay dhinteen,iyadoona aanay jirin wax iska hor imaad ah oo dhex maray iyaga iyo daalibaanka dagaalka kula jira.
Tirada Askarta isbahaysiga NATO kaga dhimatay Afganistan ayaa kor usii kacaysa,iyadoona maalin kahor mid kamid ah Askarta Nato isagana lagu dilay Koonfurta dalkaasi.
Nato waxaa ay horay u sheegtay in aanay suurta gal ahayn in Afarta sano ee soo socota si sahal ah looga adkaado Daalibaan,waxaana taa badalkeeda ay taageereen wadahadal lala galo Daalibaanka qunyar socodka ah ee dagaalka kula jira.
Dagaal yahanada Daalibaanka waxaa ay horay wacad ugu mareen in Jab xoogan ay u gaysan doonaan Ciidamada shisheeye iyo weliba Dowlada Afganistan,iyagoona uga aargudaya Dilkii Hogaamiyaha Al qacida ay ugu gaysteen Pakistan.
Labo maalin kahor ayay ahayd markii Afar qof oo isa soo miidaamiyay ay galeen xarun ciidan oo ku taal Kapul,iyadoona in kabadan 10 qof ay ku dhinteen.
Si kasta oo ay Ahato Ciidamada shisheeye ee Afganistan waxaa ay haatan galayaan feejignaantoodii ugu balaarnayd,iyagoona ka cabsi qaba weeraro hor leh oo uga yimaada Daalibaanka iyo weliba Al qacidaa.
Bishaar Al Azad oo Shacabka Dalkiisa ugu Baaqay in ay u hogaansamaan Nidaambka Dalkaasi u yaala.
Madaxweynaha dalka Suriya Bishaar Al Azad oo maanta qudbad dhinacyo taabaneysa ka jeediyay caasimada dalkaasi ee Dimishq.
Madaxweynaha ayaa sheegay in umada reer suuriya ee ku dhaqaaqaya waxyaaba aan amaanka u fiicneen aysan habooneyn islamarkaana ay xaalada dejiyaan.
waxa uu sidookale sheegay in ay banaanbaxyada iyo waxyaabaha amaanka wax u dhimaya ay ka dambeeyaan kooxo hubeysan oo mucaarad ah sida uu hadalka u dhigaye, waxaanu intaasi ku daray in ciidamada amaanku ay ku howljiraan soona ciribtiri doonaan xiliyada dhow .
Waxa uu soo hadal qaaday madaxweyne Azad hadalada ka soo baxaya wadamada caalamka ee ku aadan xaalada dalka Syria, kuwaas oo sheegay in ay dalkaasi barayaan sida dadka banaan baxaya loola dhaqmo balse wuxuu sheegay in dowlada Syria iyaga ay wax baridoonto.
Arimo ku aadan Dastuurka dalkaasi Syriya isagoona carabka ku dhuftay isbedel lagu sameyn doono dhiwaan .
Sikastaba ha ahaatee hadalka Madaxweynaha Syria oo ahaa mid dhinacyo badan taabanaya ayaa hadana waxaa uu ku soo aadayaa xili ay inta badan dalka Syria ay ka soconayaan Banaan baxyo lagu diidanyahay Xukunkiisa
SBC International Monitoring.